Nyocha na ntinye nke LMDE 201108 RC | Site na Linux
Fewbọchị ole na ole gara aga mmalite nke LMDE 201108 RC na blog nke Mint Linux ha abụọ Gnomedị ka Xfce Ọ bụ ezie na enweghi ọtụtụ akụkọ n'ezie, aga m egosi gị usoro nrụnye usoro na ụfọdụ atụmatụ ndị ọ gụnyere.
Ka anyị malite site na nwụnye. Izọ m họọrọ bụ iji mepụta CD nwụnye site na ebe nchekwa Flash na ngwaọrụ Unetbootin. Ozugbo anyị bujuru usoro ahụ site na ngwaọrụ USB, ihe yiri oyiyi ahụ na-amalite isiokwu a kwesịrị ịpụta. Agaghị m akọwa usoro ndị a nke ukwuu n'ihi anyị ahụworị ya tupu.
Mgbe anyị pịa akara ngosi Wụnye Mint Mint Anyị na-enweta otu n’ime njirimara ọhụrụ nke RC nke a Gnome: Onye nwetụrụ anya retouched installer.
Nzọụkwụ mbụ n'ezie abụghị onye ọzọ karịa ịhọrọ asụsụ anyị, nke bụ otu ihe ahụ usoro ahụ ga-eji. Ana m ahapụ nke m na ndabara (na Bekee) n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka m si eji usoro m.
E mechaa, anyị ga-ahọta ebe anyị bi. Nke a ga - enyere anyị aka maka ebe, oge na ebe a na-edebe ego na ụfọdụ nkesa.
Anyị ga-ahọrọ ndọtị keyboard. Nke m di na bekee (ama m ya site na aha of igodo) ya bu na nke m ji na ndi ozo International na ndị nwụrụ anwụ igodo inwe ike iji ñ (AltGr + n) na ngwoolu.
Nzọụkwụ ọzọ m na-ahụtụbeghị mbụ, yabụ ana m eche na ọ so na nkwalite nrụnye. Ka m na-etinye site na ihe nchekwa ọkụ, ihe nrụnye na-ajụ m na diski m chọrọ ịwụnye.
N'ezie ahọrọwo m draịvụ ike, nke na-ewetara anyị nzọụkwụ ọzọ: Hazie nkebi.
Enweela m akụkụ m kere ka m nwee ike ịtọ ha ọzọ. Maka ndị na-amaghị, naanị họrọ nkebi anyị ga-ekenye ma pịa aka nri, anyị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nke / o / n'ụlọ.
Mgbe e mesịrị, anyị ga-ahazi aha njirimara, paswọọdụ na aha otu. Ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya, nri?
Ozugbo emechara usoro a, ọ ga-ajụ anyị ka anyị wụnye Grub. A na-atụ aro mgbe niile ịwụnye idide, n'ihi na ọ ga-enye anyị ohere ịhọrọ ọ bụghị naanị kernel iji mee ihe, kamakwa ịbanye n'ọnọdụ nchekwa.
Ugbu a ọ ga-ajụ anyị ka anyị nyochaa data anyị dere na mbụ iji malite nrụnye.
Anyị na-pịa bọtịnụ wụnye na nwụnye usoro amalite nke dịruru karịa 5 nkeji.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, anyị nwere ike ịmalitegharị PC ma nweta ya site na sistemụ ọhụrụ anyị arụnyere.
Banyere nke a RC enweghi otutu inye aka. LMDE ọ na-enye anyị ọtụtụ nke otu ihe ahụ ka ọ gbanwee anyị. A distro na nkà ihe ọmụma (ma ọ bụ nzube) nke Rolling Hapụ, dabere na Debian, nke na-enye ya ìhè dị ịrịba ama ma e jiri ya tụnyere nwanne ya nwanyị dabere na Ubuntu.
Ke idaha enye emi software naanị mgbanwe dị mkpa bụ nnọchi nke Rhythmbox site Banshee ihe nke na-amasighi m ma achoghi m. Ọzọkwa ugbu a gụnyere nchekwa nke Mint kama nke Debian, nke m na-aghọtaghị. Kedu ka ha ga-esi debe ọtụtụ nchịkọta? Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ iji nchekwa ndị a, nke kwesiri inwe nchekwa karị, ana m ahapụ ahịrị iji tinye faịlụ ahụ /etc/apt/sources.list.
# Mint repositories deb http://debian.linuxmint.com/latest ule isi na-enyeghị ego ụgwọ http://security.debian.org/ ule / mmelite isi na-enyeghị ụgwọ na-enweghị ụgwọ http: //www.debian- multimedia .org na-enyocha isi na-abụghị n'efu
Agbanyeghị, na mpụga nke a ihe niile na-anọgide nkịtị: Mint-X bụ isiokwu Gtk na Oyiyi, otu ngwa na uru niile anyị maara nke a distro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Nyocha na ntinye nke LMDE 201108 RC
Enwere m ajuju banyere igwe a, o si na igbe puo ka o bughi?
Kedu ihe ị chere? 😕 Okwu si na igbe apụtachaghị m.
The The Of The Box bụ ndị na-enye ihe niile mere, usoro dị ka Apple, Mandriva, Linux Mint nkịtị….
Agụbeghị m nke ahụ mgbe ...
Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Ka m na-ekwu, o doghị m anya echiche, nke a mere m ji juo gi, ka ihu ma anyi na ekwu maka otu ihe. Agbanyeghị, na-elele ya anya site na sistemụ na-enye gị ihe niile emere, ọ dị mma, ee, LMDE si na Igbe ahụ pụọ.
Daalụ maka isiokwu ahụ, achọrọ m ịhụ ọdịiche dị na ntinye. Ekwesiri ighota na otu uru nke LMDE bu ka o gha ewepu ya, ma onodu ohuru ghapuru maka ntinye ohuru n'ihi na obughi na mmelite a di egwu.
Nke abuo, gbasara ebe nchekwa Mint, Aghọtara m na ọ bụ mgbanwe dị mkpa iji mee tupu oge eruo, n'ihi na ụlọ ọrụ Debian na-akpata nsogbu mgbe ụfọdụ, nke a gbakwunyere na mgbanwe ndị dị na mint-melite. Ma ọ dịkarịa ala m, emeela mgbanwe nke nchekwa ogologo oge gara aga ma ihe niile na-aga nke ọma. (Lee ederede http://blog.linuxmint.com/?p=1781 )
Ekele na ekele maka Blog ahụ, ọ na-aga nke ọma ma ọ bara ezigbo uru.
mmelite na-agwụ ike.
M na-eji a distro ma ọ bụghị dị mfe dị ka na-eme apt-enweta update ma ọ bụ nka update? M na-ajụ
M na-eji igwe na-agagharị na mmelite ahụ abụghị ihe iji dee n'ụlọ
Nsogbu obi ike bụ, na iso iso mgbe ị rụnyere na ọ bụ oge iji melite, ị ga-ebudata ọtụtụ nchịkọta, 1GB ma ọ bụ karịa. Maka ndị nwere bandwidth dị mma ọ bụghị nsogbu, mana ọ dabara nke ọma maka ndị ọzọ, ugbu a mmelite ahụ pere mpe.
Daalụ Carlos ọzọ maka ịkwụsị.
Ọ bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu, ọ dị mkpa iji nwetakwu onyogho kacha ọhụrụ n'ihi na nke izizi wepụtara, ọ dị mkpa iji melite ihe karịrị 1 Gb. Ugbu a, enwere m olile anya na ha ga-enye anyị mmelite na .iso ntakịrị oge. Banyere ebe a na-edebe ego, m ghọtara ihe ị na-ekwu, m ghọtara mkpebi Mint, mana nsogbu bụ na, na ọrụ m n'ihi inwe njikọ dị nwayọ dị otú a, anyị enweghị ike imelite ozugbo na ịntanetị. Anyị na-eme mkpesa nke Debian Testing na Squeeze nke zuru ezu, na-eme "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu" maka LMDE Echeghị m na ọ ga-ekwe omume 🙁
Ndewo, m ga-achọ ịma otu esi etinye distro a na pc yana windo xp? Nke ahụ bụ, ịnwe sistemụ abụọ ahụ n'otu diski ike ahụ, ebe m nwere mmasị na LMDE mana enweghị m ike ịkwaga ma ọlị, ebe m na-eji ọtụtụ ndị editọ vidiyo (mmiri mmiri, vegas, wdg) na enweghị m ike ịme ha rụọ ọrụ na gnu / Linux.
Echere m na ihe mbụ ị ga - eme (site na Windows) bụ ịmepụta nkebi iji wụnye LMDE. Mgbe inwere ya, ị ga-aga n'ihu ịwụnye na nkebi ahụ. N'ezie, ị nwere ihe ọmụma gbasara nkewa na GNU / Linux?
Aghọtara m ihe gbasara nkewa na GNU / Linux na ihe m na-aghọtaghị akọwaalarị m nke ọma na saịtị dị iche iche, ọgbakọ, wdg. Yabụ, ọ bụrụ na ihe esiri m ike, m ga-ajụ gị n'ezie. Ah, daalụ maka ịza ajụjụ m n'oge na-adịghị anya!
Anyi nabata gi. Echere m na ihe niile na-aga nke ọma na nwụnye gị 😀
Ọ ga-amasị m ịwụnye distro a na kọmputa m mana enwere m obi abụọ banyere GRUB n'ihi na ọ na-eme na m nwere Linux ndị ọzọ na igwe m ma ha na-eji GRU2. Can nwere ike ịkọwa okwu a biko. Ọ bụrụ na m nwere ike idozi ya ma ọ bụ ị nwere ike ịgwa m otu esi eme ya, ekpebisiri m ike ịwụnye ya. Daalụ.
Ọfọn, LMDE na-eji Grub2 yabụ ahụghị m ihe bụ nsogbu. N'ezie, distro ikpeazụ ị wụnye ga-enwe ike ịchọpụta ndị ọzọ niile arụnyere na Grub. Nke ahụ bụ ajụjụ gị?
Daalụ maka azịza gị. Ozugbo emechara m obi abụọ, aga m aga na ngwụcha ụka a na-esote ka echichi nke nkesa a ebe ọ bụ na m ga-enwe oge iji mee ya n'ihi na agụọla m na ọ bụ sistemụ arụmọrụ dị egwu. Enweela m DVD ntinye ugbu a iji wụnye. Site n'ụzọ na n'ihi ọchịchọ ịmata ihe: Inwale DVD echichi na imeghe ndepụta isi mmalite m nyochaa na ndepụta nke nchekwa abụghị otu ihe ị gosipụtara na post a. Enwere anọ ma ha bụ ndị na-esonụ:
-deb http: // packages.linuxmint.com/debian isi upstream mbubata
-nke http://debian.linuxmint.com/lates nnwale nnwale na-enye ndị na-anaghị akwụ ụgwọ
-nke http://security.debian.org/testing/update isi na-enye onyinye na-abụghị n'efu
-nke http://www.debian-multimedia.orgtesting isi na-abụghị n'efu
Ọ na-adịrị m ma ọ bụrụ na ịgbakwunye onye nbipute m ga-etinye ebe nchekwa ọhụrụ.
Ana m eji LMDE, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya dị ka Arch mana o nwere obere ihe ya, ọ bụghị ihe niile bụ pink, ka anyị lee
-Openshot, blender, na ụfọdụ ngwa ndị ọzọ na-enye nsogbu nke ngwugwu agbajiri agbawa, ya bụ, ịdabere na ya enweghị ike idozi n'onwe ya.
- versiondị ardor, hydrogen na ụfọdụ ndị ọzọ bụ nsụgharị nke ndị nyocha, ya bụ na ha chọrọ ka mma karịa ka ha chọrọ (n'echiche ahụ m ghọtara ya ebe ha bụ nsụgharị maka ndị mmemme), mana ọ ga-enye gị nhọrọ ahụ iji wụnye nkwụsi ike nke ya.
RT 3 kernel na-enye ọtụtụ nsogbu, ọkachasị plymouth + hibernate, ihe niile bụ ka etinye kernel defaullt na nsogbu goodbye, na 1TB mpụga HD m tụbara ụjọ kernel, ọbụnadị m deziri ya na ex4 mana ihe ka dị otu
Ka o sina dị, mgbe m nwesịrị ọtụtụ nkwụghachi ụgwọ, maka ịgwakọta ọtụtụ nkwụghachi, na ụfọdụ mgbaghara na onye ọzọ, na njedebe m niile akwụla ụgwọ, ugbu a ejiri m obi ụtọ na-eji LMDE na nke ọma ahazi Jackd na-enweghị Xruns, na-aga pulseaudio, na OpenShot na ndị ọzọ arụnyere, mana Appmenu-egosi adịghị ka ebe a na-edebe akụ (ubuntu globalmenu), ma ọ bụrụ na ị wụnye ya na ebe nchekwa ya, GDM dara, n'ikpeazụ, m etinyela Globalmenu a ma ama na agbanyeghị na APPS niile na-agwakọta, mana ya na-arụ ọrụ kwụsie ike, ruo mgbe m jikwaa iji wụnye Appmenu-egosi na ọnọdụ xD
Ma nkesa n'onwe ya dị mma ọ bụ ezie na anaghị m akwado ya maka ndị ọhụrụ n'ihi na ngwugwu agbajiri agbaji, ha nwere ike ịla ara, mana dịka m kwuru tupu ọ dị mfe karịa Arch Linux
Agbalịbeghị m ịwụnye Blender na nchịkọta ndị yiri ya ka enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ ihe banyere nke ahụ. Ebe m nwere LightDM na nchekwa Debian, anaghị m eji GDM eme ihe ọ bụla na ngwa ngwa ngwa ngwa na LMDE na Debian adịghị egbu maramara dị ka nke dị na Ubuntu, ọ bụ ya mere na ọ naghị egosi ngwa niile.
Ndewo, enwere m draịva ike 2 80GB ma etinyela m LMDE. Achọrọ m LMDE na ọ nweghị ihe ọzọ, mana onye nrụnye agaghị ekwe ka m jiri draịva ike 2 ahụ, aga m ahọrọ otu. Ma ugbu a enwere m LMDE na disk ma enweghị m ike iji nke ọzọ, edeziri m ya na etx4 mana ịchọrọ idetu faịlụ na diski, anaghị m enweta nhọrọ iji mado. Ọ na-ajụkwa m maka paswọọdụ oge ọ bụla ịkwago ya. Na ihe m chọrọ bụ itinye ya na sistemụ arụmọrụ, nke na-amata diski 2 n'ozuzu ya. Daalụ nke ukwuu
Zaghachi ka fixu
Ihe Thunar enwetụbeghị